Latest Myanmar News - Page 270 of 277 - News & Media
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ ၁။ ယမန်နေ့ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်) (DMR) တို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ စစ်ဆေးခဲ့မှု၊ လူနာသစ်များတွေ့ရှိမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအကျယ်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ၂။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်) တို့ သည် (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စုစုပေါင်း (၃၂၉) ဦးတို့၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား စစ်ဆေးခဲ့ရာ စုစုပေါင်း (၁၂) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) ရပြီး ကျန် (၃၁၇) ဦး တွင် COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ (မတွေ့ရှိ) ပါ။ ၃။ … Read more
မတ္တရာမှ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာသည် လေဖြတ်နေသူဖြစ်ပြီး မတ္တရာမြို့ အမှတ်(၂)နယ်မြေ၊ ကန်သာရပ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်၊မိသားစုဝင်များကို Quarantine ထားရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေဟုဆို မတ္တရာမြို့နယ်နေ အသက်(၈၀)အရွယ် COVID-19 လူနာ အမျိုးသားသည် လေဖြတ်နေသူဖြစ်ပြီး မတ္တရာမြို့ အမှတ်(၂)နယ်မြေ ကန်သာရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်သည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက အတည်ပြုသည်။ လက်ရှိတွင် ယင်းလူနာ၏ မိသားစုဝင်မျာကို Quarantine (အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း) ထားရှိနိုင်ရန်နှင့် နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အား အသွားအလာ အဝင်အထွက် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မတ္တရာမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းမင်းက ပြောသည်။ “လူနာက လေဖြတ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ အကြောင်းတော့ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူး။ တစ်ဝင်းထဲမှာ မိသားစုတွေအပြင် သမီးရော၊ သားမက်ရော အတူနေတယ်လို့ ကြားတယ်”ဟု ဦးမင်းမင်းက … Read more
Uric Acid ယူရစ်အက်ဆစ်ကို လျော့ချပေးမည့် အစားအစာများ Gout ဂေါက်ရောဂါဆိုသည်မှာ သွေးထဲမှာ ယူရစ်အက်ဆစ်တွေ လွန်ကဲလာလို့ ဖြစ်လာရတာပါ ။ ခန္ဓာကိုယ်က Purine ပရိုတင်းတမျိုးကို ခြေဖျက်ရာကနေ ယူရစ်အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ယူရစ် အက်ဆစ်လွန်ကဲလာတာကို လေ့လာတဲ့အခါ ၃ ပုံ ၁ ပုံကစားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေကြောင့်လိုိ့သိရပါတယ်။ ပဲ. ဆိုဒါ. ဘီယာနဲ့ ပင်လယ်စာတွေမှာ purines များစွာပါတာမို့ ယူရစ်အက်ဆစ်ကို တက်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ယူရစ်အက်ဆစ်ကို ဆီးနဲ့အတူ ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ထုတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏထက် ယူရစ်အက်ဆစ်တွေများပြားလာတဲ့အခါ အပ်ချောင်းပုံ ပုံဆောင်ခဲ Urate crystals တွေက ခြေချောင်း လက်ချောင်း အဆစ်တွေမှာ စုပုံလာပြီး နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆီးကျောက်နဲ့ … Read more
၅ဦးထပ်တိုး ၁၃၂ ဦးဖြစ်လာ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် (ပထမအသုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၂) ခု အနက် (၅) ဦး ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) ရပြီး ကျန် (၇၇) ခုတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိ (မတွေ့ရှိ)ပါ။ ၂။ (၂၃-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၁၃၂) ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် ရောဂါပိုးကင်းစင်သူ (၉) ဦး ရှိပြီဖြစ်ကာ ၎င်းတို့အား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် … Read more
သပြုသီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးပြုပုံ
လေးဘက်နာကြောင့် ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေကိုက်နေရင် သပြုသီးနဲ့ ဆား ဆတူ/အချိုးတူ ပြုတ်ပြီး ပေါင်းခံ ချွေးအောင်းပေးလိုက်ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပ် ချွေးပုပ်တွေ ထွက်လာပြီးရင် ရေချိုးပေးပါ။ အစားရှောင်စရာ မလိုလောက်အောင် သက်သာပါတယ်။ သပြုသီးကို ငါးခူနှင့်ချက်စားလျှင် ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးကောင်းလာပါမည်။ ငါးရံ့ကင်ပြီး သပြုသီးနှင့် ဟင်းချိုချက်စားလျှင် ဆီးချိုရောဂါ သက်သာပါမည်။ သပြုသီးပြုတ်ပြီး တိုိ့စားမြုပ်စားလျှင် နှလုံးအားကောင်းပြီး ဆီးရွင်ပါသည်။ ဆီးကျောက်တည်လျှင် သပြုသီးအရွက်ကို သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကျိုသောက်ပါက ကျောက်တဖြည်းဖြည်းကြွေကျပြီး သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။ ဝမ်းကိုက်လျှင် သပြုသီးပင် အခေါက်ကို ဆားနှင့်သွေး၍ သောက်ပေးပါ။ (ဟင်းစားတစ်ဇွန်းစာ) ခရစ်ဒစ် Unicode လေးဘကျနာကွောငျ့ ခွဆေဈလကျဆဈျတှကေိုကျနရေငျ သပွုသီးနဲ့ ဆား ဆတူ/အခြိုးတူ ပွုတျပွီး ပေါငျးခံ ခြှေးအောငျးပေးလိုကျပါ။ တဈကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပျ ခြှေးပုပျတှေ ထှကျလာပွီးရငျ … Read more
← Previous Page1 … Page269 Page270 Page271 … Page277 Next →